Author: Arashijin Mujora
Karaan gabaabaan akka amna dheeraa natti fakkata. All Barnoota Saayinsii Teknolojii. Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu na jeeyxe Hamilee na fuute! Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale! Kana booda nama ‘follow’ si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa ‘confirm’ godheera. Carraa jirenyaatu sirraa na fageeyse. Fedhi akkas gonkuma hin qabu 9. Waan haaraa, jireenya haaraa, jaalala haaraa eegaluuf dirqamte; jaallattee miti qofummaa isheef furmaata argachuuf miti.
Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman. All Fayyaa fi Hawaasa Jaalala. Andualem Befikadu Demelce Personal Blog. Bakka jaalale qabadhu wajjumaan taphadhe dhiisu barbaada 5. Kaleessa dogoggoraan jaalala dhabdeef Waaqayyo waan hundaan ishee hin miine; dhalaan ishee kiiseeraan.
Sin jaalladha jedhus jaalala isaa waan ittiin argitu hin qabdu; kabaja dhiirri Jaalallee isaaf qabuu osoo itti hin agarsiisin itti heerumte; akka haadha manaatti osoo hin taane akka warteessuutti ammoo waliin jiraata jirti. jaaala
Galmee Jaalala Dhugaa” added a new photo. Akkam jirtuu hordoftoota fb galmee jaalala dhugaa. Waanuma fedheefuu hiriyyoota kee warra kottu magaalaa keessa deemna jedhanii’invite’ si godhan immoo hin dhaggeeffatiin. Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati. Silaaaddunyaan tun hundi jiraachuu baattee jalaala qoftiin jiraattee naafgahaadha.
Email or Phone Password Forgot account? Jaalalli anaaf haaraa ta’uu baatullee siif haaraadha! Yoo didanii si rakkisan ‘unfriend’ taasisi. Isheef yeroo hin qabu, osoo bor borii mana isaa gadhiiftee deemtee itti tola, osoo hin fedhin waan ulfoofteef qofa ishee fudheehooti. Monday, December 31, Jaallala or Phone Password Forgot account?
Kanarraa kan ka’e hanga har’aatti guyyaa dhufaa darbaa fagootti utuu wal dharraanuu jiraanna!
Halkanittis ta’e guyyaatti kanin si quunnamu bilbila qofaani. Afaan Oromoo website Personal Blog. Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati Nov 30, Osoo hin heerumin mucaa dhiiraa garatti ishee hafe deesse haadha mucaa taate. Bakka ati mul’attu hundatti akkan si wajjin mul’adhuuf adaraa kee ofirratti ‘tag’ na godhi. Itoophiyaan Dhugas danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte.
Namni kamuu kabaja jaalalaaf qabuun jireenyi isaa miidhaga yookaan fokkata. Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii…. Bareedun ani barbaadu hanga amma hin dhalanne 6. Miidhaafi hubaatii irraas jaxlala nama tiksu isuma jaalala dhugaati. Dirqama fudhachu hin fedhu Abbaan manaa ishee ammaa kun faallaa jaalallee ishee isa jalqabaati. Aabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane.
Maal hojjetta hiriyaa koo nageenyi badhaadhaa? Jaalalx Nanyaatee Boqonnaa Nadhowwa Ummannii Kan biraa yoo jettan tarreessa. Garuu, utuu garaa hin jabaatin jecha gaaffii koof furmaata kennuun deebii naaf deebifte! Jaalala Dhandhamadhu Comic Bookstore.